Yintoni emisa imibutho ekuphumezeni amaqhinga okuthengisa? | Martech Zone
Yintoni emisa imibutho ekuphumezeni amaqhinga okuthengisa?
NgoLwesithathu, uDisemba 30, 2015 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Njengoko singena kwi-2016, imibutho isasokola neyayo ukuthengisa kwezentlalo amacebo. Sabelane ngayo iziseko zentengiso yentlalo kwizithuba ezidlulileyo kwaye akukho kuziphika izibonelelo zeqela elisebenzisa iindlela zokuthengisa zentlalo:
I-61% yemibutho ebandakanyekayo kuthengiso lwentlalo inika ingxelo yempembelelo entle ekukhuleni kwengeniso, engaphezulu kwama-20% ngaphezulu kwabathengisi abangahlaliyo!
Ngezo ntlobo zezibalo, ucinga ukuba yonke imibutho iya kwamkela ukuthengisa kwezentlalo njengesicwangciso esiliqili… kodwa akukho lula oko.
Iipesenti ezingama-72 zeengcali zokuthengisa zivakalelwa kukuba azilunganga kwintengiso yentlalo
Imiceli mngeni emikhulu ekuthengiseni ukwamkelwa kwentlalo ichongiwe kwidatha yophando yakutshanje evela kwiintengiso zoBomi. Uqeqesho olunganelanga, ukunqongophala kwemilinganiselo ye-ROI, kunye nokusetyenziswa okungaphelelanga kwizicwangciso zokuthengisa kukhokelele kumashishini asokola ukuphumeza iinkqubo. Uninzi uninzi alunayo inkqubo yoqeqesho esebenzayo kunye nendawo kwaye phantse ikota ezintathu zabaqeqeshi bezentengiso abanobuchule bokusebenzisa isicwangciso.
Kwangoko kulo nyaka, sabelane nge Isikhokelo saBaqala ukuThengisa ngeNtlalo infographic evela kwintengiso. Ewe izicwangciso zakho kufanele ukuba zijolise kakhulu ekuboniseni abantu ekujoliswe kubo, ukwakha igunya lakho, kunye nokuhamba phambi kwezikhokelo ezifanelekileyo.
tags: 2016iinkqubo zokunika ingxeloimvucubeukuthengisa ubomiuqeqesho lwe sandlerukuthengisa kwezentlalointengiso yentengiso yoluntuukubona kwangaphambili
I-Starbucks, Unokwenza ngcono kwiNtlalo